Tayogelinta - Central Youth LinkCentral Youth Link
Horay ayaa loo yiri cududdii fayoowbaa miskax caafimaad leh, ciyaartooy haddaad tahay curadkii bar-baareed, caafiyoo jirkaagoo, camal sami u dheeloo yaan lagu cambaarayn, bulshadaad ka curatana ka ilaali ceebaha. Waa berigii aan qaranka lahayn heesihii Radio Muqdishu laga soo dayn jiray marka lasoo daynayo barnaamijyada ciyaaraha, siiba kubbadda cagta. Niyad jabi mayno oo waannu gaari haddii Alle idmo in aan noqono sidaan ahaan jirray beri iyo si ka fiican.
CYL waxaa ka go’an in ay taageerto, tababarto isla mar ahaantaan tayayso dhallinta awoodda rabbaanigaa ee dhinaca isboortiga leh, gabar iyo wiil intaba. Haddii Eebbe qadaro dib ayaan kasoo daabici doonaa barnaamijyada iyo qorsha isboorti ee ay CYL damacsan tahay in ay hir galiso.
Sawiradaan waa ciyaar saaxiibtinimo oo hadda kahor ay CYL soo agaasintay si dhallintu isu bartaan isuna dhex galaan.